ESI HỌRỌ OTU HDMI - HDMI - 2019
Ọ dị mkpa ka ị belata oge ọ bụla faịlụ ọ bụla na-eme site n'aka ndị ọrụ niile. Ndị na-eme mpịakọta faịlụ n'otu oge na-eji ma ọ bụ usoro nchịkọta pụrụ iche dị ka WinZip ma ọ bụ WinRAR, ma ọ bụ ngwanrọ maka usoro ihe odide ụfọdụ. Ọ bụrụ na a ghaghị ime ihe dị otú a n'ụzọ siri ike, nhọrọ kachasị mma ga-arụ ọrụ na ọrụ weebụ.
Kedu ka esi depress faịlụ online
Ihe ndị kachasị dị na ụdị ndị a bụ ndị ọkachamara ihe oyiyi na ndị na-edebe ihe ntanetị. Akwụkwọ mbụ mpempe akwụkwọ mpịakọta nke mbụ maka nzafe na ntinye ntanetị dị na saịtị. Ndị nke abụọ na-enye gị ohere ịbịakọta faịlụ ọ bụla n'ime edebe ihe mgbe ụfọdụ na mkparịta ụka ụfọdụ, si otú a belata nha mbụ ha.
Usoro 1: Ntọgharị Ịntanetị
Otu n'ime ndị nnọchianya kachasị mma nke ndị na-edebe weebụ. Ọrụ ahụ na-enye nhọpụta nke usoro mmechi ikpeazụ isii na otu nrịbama nke mkparịta ụka. N'otu oge ahụ, ngwá ọrụ ahụ na-enye ohere ọ bụghị naanị ịbịa faịlụ, kamakwa iji tọghata ụfọdụ edebe ihe ochie n'ime ndị ọzọ.
Ọrụ ntanetị na Ịntanetị na-agbanwe
Iji malite mkpakọ akwụkwọ, bulite ya na weebụsaịtị ahụ na kọmputa ma ọ bụ ihe nchọgharị weebụ ọzọ.
Họrọ usoro nchịkọta ikpeazụ n'ime ndepụta ndọpụta. "Ke nso".
Ọzọ, na mpaghara kwesịrị ekwesị, dee ọkwa dị mkpa nke mkpakọ faịlụ, ma ọ bụrụ na nhọrọ dị otú ahụ dị.
Jide n'aka na ihe ahụ bụ "Kọmpụ faịlụ ahụ ahọrọ" akara ma pịa bọtịnụ ahụ "Tọghata".
Mgbe emechara usoro nke ịdebe na ịkwakọ ngwaahịa ahụ na ngalaba "Nsonaazụ" a ga - egosiputa aha nchịkọta agwụla, nke bụkwa njikọ maka nbudata faịlụ ahụ na kọmputa.
Idebe ihe ederede na ntanetị na Ịntanetị anaghị ewe oge dị ukwuu: ngwa ngwa na-arụ ọrụ ma ọ bụ nnukwu faịlụ.
Usoro 2 ezyZip
Ngwa ntanetị dị mfe nke na-enye gị ohere ịmepụta ma mepee zip-archives. Ọrụ ahụ na-akwakọba ngwa ngwa ahụ, ebe ọ bụ na ọ dịghị ebunye ha na ihe nkesa ahụ, ma na-eme ha ozugbo na ihe nchọgharị, na-eji ike nke kọmputa gị.
EzyZip ọrụ ntanetị
Iji malite ịrụ ọrụ na ngwa ahụ, họrọ faịlụ achọrọ iji bulite na saịtị ahụ site na iji bọtịnụ kwesịrị ekwesị na ngalaba ahụ. "Họrọ faịlụ ka ịdebe".
N'ọhịa "Aha faịlụ" kọwaa aha arụsị e mechara ma pịa "Faịlụ Zip".
Mgbe nhazi akwụkwọ ahụ, pịa bọtịnụ ahụ. Chekwaa Zip Zipka ibudata nchịkọta ikpeazụ.
Usoro 3: Ntọgharị Ịntanetị
A na-ewu ewu maka ịtụgharị faịlụ site n'otu usoro gaa na ọzọ. Ọrụ ahụ na-enyekwa ngwá ọrụ dị mfe iji dochie faịlụ ọ bụla n'ime ihe ederede, ọ bụ ezie na ọ na-etinye ya dịka ntọghata na TAR.GZ, TAR.BZ2, 7Z ma ọ bụ ZIP.
Ọrụ ntanetị Online Ntọghata
Iji mpịakọta faịlụ achọrọ, buru ụzọ pịa njikọ dị n'elu ma họrọ usoro nchịkọta ikpeazụ.
Na ibe nke mepee site na iji bọtịnụ ahụ "Họrọ faịlụ" bubata akwụkwọ achọrọ n'aka onye nyocha.
Wee pịa "Agbanwe faịlụ".
Dabere n'ụdị akwụkwọ edemede na ọsọ nke njikọ gị, usoro mkparịta ụka ga-ewe oge.
Mgbe njedebe nke ọrụ ahụ, faịlụ ahụ agwụla ga-ebugharị na nchekwa nke kọmputa gị. Ọ bụrụ na nke a emeghị, ọrụ ahụ na-enye gị iji njikọ ntanetị kpọmkwem.
N'ụzọ dị mwute, ọkwa kachasị nke faịlụ a na-abanye n'ime Online Convert bụ 100 megabytes. Iji rụọ akwụkwọ ndị ọzọ dị egwu, ọrụ ahụ na-arịọ ịzụta ndenye aha. Ọzọkwa, n'agbanyeghị na eziokwu ahụ na-egbochi ịchọta na-enweghị nsogbu, ogo nke mkpakọ nke faịlụ juru juru na-etinye ihe dị ukwuu iji chọọ ya.
Usoro 4: Optimizilla
Ejiri ngwá ọrụ a iji kpochapụ ihe oyiyi na usoro JPEG na PNG. Ọrụ ahụ na-eji njikwa algorithms arụpụta ihe osise dị elu, na-ekwe ka ị belata ogo nke onyinyo ahụ na ọkwa kachasị dị ala na ma ọ bụ na-enweghị mma ọnwụ.
Ọrụ online Optimizilla
Mbụ, bubata ihe oyiyi dị mkpa na saịtị ahụ site na ịpị bọtịnụ ahụ. Download.
Ebe ọ bụ na akụ na ụzụ na-akwado nhazi usoro nke faịlụ, ị nwere ike itinye aka 20 foto n'otu oge.
A ga-etinye ihe oyiyi echetara ozugbo. Optimizilla na-ebelata ogo nke ihe oyiyi, ma na-ezere ọdịda dị mma.
Ọrụ ahụ ga-egosipụta ọkwa nrụpụta dịka pasent kpọmkwem na vidiyo nke faịlụ ndị dị na ya.
Ị nwere ike ịchekwa ihe oyiyi na kọmputa site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Download niile" ma ọ bụ jiri bọtịnụ kwekọrọ n'okpuru foto ọ bụla iche.
Ọzọkwa, ogo nke mkpakọ faịlụ nwere ike ikpebi aka.
Maka nke a, a na-enye mpaghara nhụchalụ kwekọrọ ekwekọ na ihe mmịfe nke na-edozi oke "Mma".
Ihe omuma ahu agaghi egbochi oke ihe oyiyi na ihe ndi ozo ejiri kwa otu oge. Nwekwara ebudata ụlọ ahịa ihe osise ihe karịrị 1 hour.
Usoro 5: iLoveIMG
A dị mfe ma dị mfe ọrụ maka compressing JPG, PNG na GIF faịlụ oyiyi. A na-eme mkpakọ na ọnụego kachasị elu na mbido mbụ nke ihe oyiyi na-enweghị ọdịda nke àgwà.
Ọrụ Ịntanetị ILoveIMG
Jiri bọtịnụ "Họrọ Images"iji bulite ihe oyiyi achọrọ na saịtị.
Pịa "Mpikota onyonyo Images" na menu mmanya na nri iji malite usoro mkpakọ faịlụ.
Mgbe ịchisịrị nhazi foto, a ga-echekwa ihe oyiyi ndị a gụrụ na PC gị.
Ọ bụrụ na nbudata ahụ amaliteghị na akpaghị aka, pịa bọtịnụ ahụ. "Gbaa ihe oyiyi a mụnyere".
Ọrụ ahụ bụ n'efu na enweghị ihe mgbochi na ọnụ ọgụgụ na olu nke faịlụ eburu ya.
Lee kwa: Kọmpụ PDF akwụkwọ online
Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịpịkọta otu ma ọ bụ ọtụtụ faịlụ, ọ kacha mma iji otu n'ime ndị na-edebe ihe ntanetị dị n'elu. Ọfọn, a ghaghị inye mkpado oyiyi na ọrụ kwekọrọ ekwekọ, akọwakwara ya na isiokwu ahụ.